प्रचण्ड अडानः सर्वसत्तावाद चल्दैन, पार्टीभन्दा माथि कोही छैन - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी भन्दा माथि कोही पनि नभएको बताउँदै हरेक समस्याको समाधान छलफलबाट गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
पार्टीमा विधि र पद्दती मिचिएको कारण वर्तमान संकट सिर्जना भएको प्रचण्डको ठहर छ ।
पार्टीमा स्वस्थ छलफल हुने वातावरण रोक्ने काम समेत ओलीबाटै भएकोले समस्याहरु बढ्दै जाने उनले बताए ।
“बैठकबाट भाग्ने प्रवृत्तिले समस्या शुरु ग¥यो ।” प्रचण्डको भनाई देखिन्छ्, “बैठकबाट भाग्ने, अनि पार्टी बाहिरका फोरममा गएर पार्टीकै नेताहरुलाई तथानाम गाली गर्ने ? त्यही कुरा बैठकमा राखेर छलफल गर्न सकिन्नथ्यो ?”
यसअघि भदौमा चलेको लामो विवादको बेला कमिटिको बैठक छोडेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूविरुद्ध भारतले नेकपाका नेताहरुलाई उचालेर षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
“भदौ २६ मा एउटा सहमति भयो । अब पार्टीले गति लिन्छ भन्ने आशा सबैमा पलाएको थियो ।” प्रचण्डको भनाई छ, “तर फेरी पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो । म नै राज्य हो, म नै सर्वेसर्वा हो, मेरो भनेको सबैले मान्नैपर्छ भन्ने अतिवादले सहमति विपरित ओली जानुभयो ।”
याे पनि पढ्नुस प्रदेश सरकारहरु संकटमा, अधिकांशमा प्रचण्ड समूहको स्पष्ट बहुमत
भदौ २६ को स्थायी समितिको पालना गर्नुको साटो अध्यक्ष ओली हिंडन थालेपछि सचिवालयको बैठक बसाल्न दजैनौपटक अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । अध्यक्ष ओली भने कुनै पनि अवस्थामा छलफलमा बस्न राजी भएनन् । बरु उनले सरकार सञ्चालनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आफुखुसी निर्णय गरेपछि सचिवालयका पाँच जना सदस्यले ओलीलाई भेटेर बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।
सचिवालयका पाँच जनाले निवेदन दिनुअघि नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितिबारे छलफल गर्न लिखित निवेदन दिएका थिए ।
तर यी कुनै पनि कुराको सुनुवाई नभएपछि सचिवालयका पाँचजनाले लिखित निवेदन नै लेखेर ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गरे ।
विधान अनुसार, कुनै एक सदस्यले पनि बैठकको माग गर्न सक्ने र अध्यक्षसँग परामर्श गरी बैठक बोलाउनुपर्ने दायित्व महासचिवको हुने वामदेव गौतमले टिप्पणी गरेका थिए ।
तर सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखितरुपमा बैठक बोलाउन माग गरेपनि ओलीले भने बैठक बोलाउनुको साटो १० पेजको लिखित पत्र प्रत्युत्तरका रुपमा अगाडि सारे ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड–माधव पक्षको ७७ वटै जिल्लामा बिस्तारित भेला
प्रचण्ड भन्छन– फायर वहाँले खोल्नुभयो । हामीले विधिमा हिंडौं भनेर लामो कोशीस गर्दा समेत उनी राजी भएनन् । बरु बैठक माग गरिएको पत्रको जवाफमा गुटबन्दीको आरोपसहितको लामो पत्र लेखे ।
मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले यो कुरामा जोड दिँदै भने– अहिलेको विवादको फायर तपाईंले नै खोल्नुभएको हो । पार्टीको अन्तरसंघर्षलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नुभएको छ ।
सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले पार्टी बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा समेत अपमानित हुनुपरेको प्रसंग समेत स्मरण गरे । “सचिवालय बैठक बोलाउन हामीले आग्रह गरेर लेखेको पत्र बुझाउन जाँदा कति अपमान गर्नुभयो रु सबै कुरा पद्धतिमै हुन्छ भन्दै तोक लगाउनुभयो ।” प्रचण्डले भने, “बैठक बोलाउनुको सट्टा उल्टै लाञ्छना लगाउनुभयो, हामीलाई अपमान गर्नुभयो ।”
केपीभित्र व्यक्तिवाद र कुण्ठाले बलियो जरा गाडेको प्रचण्डको ठहर देखिन्छ । मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘ केपीजी, तपाईं असाध्यै व्यक्तिवादी र कुण्ठाग्रस्त मान्छे हो, तपाईंमा ‘आई एम द स्टेट’ भन्ने भाव छ ।’
याे पनि पढ्नुस नेकपाको विवादले जनता निराश भए, सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्‍यो: महरा
ओलीले प्रचण्डलगायतका नेताले गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएपनि प्रंचण्ड त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । बरु अरुलाई गुटबन्दीको आरोप लगाउने ओलीले नै बालुवाटारमा बसेर पार्टी फुटको कदम धेरै पटक चाल्नुभएको उनले आरोप लगाए । “देशव्यापी गुट भेला, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका कार्यक्रम, एमाले दल दर्ता र पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएर फुटतिर लैजाने काम तपाईंबाट भएको छ ।” उनले भने, “अहिले पनि तपाईंले मलाई र अरू साथीहरूलाई उत्तेजित पार्न खोजिरहनुभएको छ । यिनीहरूले उत्तेजित भएर अभिव्यक्ति दिउन् भनेर लागिरहनुभएको छ, तर हामी उत्तेजित हुन्नौं ।”
सचिवालयको बैठकको अन्तमा प्रचण्डले पार्टी विधि र पद्दतीमा अघि बढने भएकोले कसैले आदेश दिने र अरुले खुरुखुरु कुरा स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । उनको भनाई थियोः तपाईं कि म रहन्न, कि प्रचण्ड रहन्न भन्दै हिँड्नुहुन्छ, फेरि आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा रहेको देखाउनुहुन्छ, यो कसरी मिल्यो ? प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिन्न भन्ने तपाईं को हो ? यसो गर, उसो गर भनेर तपाईंले निर्देशन दिने, मैले खुरुक्क मान्ने भन्ने हुन्छ ?
ट्याग्स: नेकपा विवाद, सचिवलाय बैठक